Jaango iyo Jwxo-shiil, Jalwaa Jarmal Aadayoo, Jiif Isbitaalbaa Jiroo Jeebabkiinay Baadhayaan, Iska Jira! – Rasaasa News
May 21, 2010 Jaango iyoJwxo-shiil, Jalwaa Jarmal Bay Aadayaan, Jiif Isbitaalbaa Jiroo Jeebabkiinay Baadhayaan
“Faaliyaa fiidba tagay, Ido gol qabad baa gar qabay, hooyo Hununuf iyo Hananafoow anigu hadhaye hawka gala” Erayadaas waxaa ku tawaawacday hooyo dhashay laba dhurwaa oo yar yar, kolkii uu dhabarka hooto kaga hubsaday nin ciil u qabay oo ay baraar ka cuneen.
Raxan dhurwaayo ah ayaa waxay laayeen baraar, dharaartii oo dhan waxay dhayraqaanba kolkay galabtii ahayd ayey laba dhurwaa yidhaahdeen dadkii baraarka lahaa oo raadin baa raqda inoogu iman wayna ina dile ee inakeena tagnee. Hunguri xumada iyo gancid la,aantu waa dhibaatee waxaa taladaas diiday habar dhurwaa ah oo haysatay laba dhurwaa oo dhala.
Xili dambe oo habeen ah ayaa habartii iyo labadeedii dhasha ahaa oo dhaylo ka dhargay oo dhayraqaya waxaa u yimid ninkii baraarka laga cunay. Waxaana uu ku caydhsaday habartii hooto aad u af badan, kolkii ay aragtay in ayna geeri ka baxsanaynin ayey catowga iyo dardaaranka kore tidhi.
Hadaan idin qabadsiiyo ciwaanka iyo dulucda sheekada. Jwxo-shiil, oo ah ninka masuulka ka ah dhibaatada maanta haysata Somalida Ogadeeniya iyo qaybsanaanta dadweynaha, ayaa waxaa uu hoosta ka xidhay xadhko. Waxayna beeshiisu go,aan ku gaadhay in la galbado, waxaana uu hoosta ka dirsaya dad isaga matala, heshiiskaas oo haatan gabogabo ku dhawo ayuu la gaadhay Itobiya.
Anigu [Jwxo-shiil] waan gaboobay dhibadana waan gaystay wixii igu dhici ha igu dhaco ee reerku waa in uu badbaado waa go,aanka Jwxo-shiil.
Maciibada maanta agg joogta ayey dhibaato haysataa, oo aan iyagu meelna u saarnayn naftooda cid kalena aan waxba u taraynin.
Sida naloo sheegay Jwxo-shiil, wuu xanuunsan yahay sidii uu Eritrea uga soo noqdayba, Jarmalka ayuuna doonayaa in uu isku soo daweeyo, nasiib daro Jwxo-shiil ma quudho hantida lacageed ee uu hore uga uruursaday dadweynaha, waxaana uu jeclaystay in uu isku daaweeyo Jeebka dadka Jarmalka ee Somalida Ogadeeniya intooda aan wali fahmin isaga.
Si ayna cidina u fahmin ayuu Jaango u sheegay in Frankfort ay isaga iyo ciyaalka uu dhex socdo ay dadka u qaadaan “Jeclyiyaaye Jamaadey Jwxo-shiilka, jecliyaayey Jeebkiina wax ku jira, jecliyaayey dadkaygo la jaro” si lacag looga helo dabadeedna isaga loogu daweeyo.
Jwxo-shiil, ayaa dadka dadkaas aan waxba garanaynin cod gaaban ugu sheegi doona “adeer halganka meelo badan ayaanu u maray, maantana halgankeenu meeshii ugu fiicnayd ayuu marayaa” subxaana iyo khayaanada uu hoosta ka wado!
Ninka magacyada badan Cabdiraxmaan Jalwo, ayaa dadka ku odhan “onlf anigaa aas aasay, maraxalado badan bay soo bartay, ciidan aan ku faano waa noo joogaa, jaaliyado taageersan halganka waa jiraan” Afka uu ku hadlayo iyo horta onlf xidhiidh ma ka dhaxayn karaa, ciidanka uu sheego xagee buu ku arkay waligii ma arag Ogadeeniya!
Waxaa Ololaha lacagta lagu uruursanayo u wada kuwa la dirtay kuwo ay sii dirsadeen oo ay ka mid yihiin Ganeey Sheekh Maxamed Islaan iyo Maxamed Faarax Ligane. Wali waxaanaan garanin sababta ay dadkani ugu ololaynayaan Jwxo-shiil, waxaanse ogaanay in Ganeey uu u shaqeeyo KAAH, musafane uu ku amaray in uu la shaqeeyo kooxda Jwxo-shiil, si uu u joogo xafiiska Frunk fort ee KAAH, ganey lamaba socdo in KAAH lagu kala baxay. Maxamed Faarax Ligane Mooji wax waalay, waanse heli doonaa.
Ugu dambayn kolka ay heesaha iyo hadalada beenta ah dhamaadaan ee la soo kala tago Jwxo-shiil, ayaa ku hadhi doona Jarmalka Xoogaaga Yuuroga ah ee la uruuriyeyna lagu daweyn doonaa.
Qorshayaasha Cusub ee ay Xukuumada Eritrea ka Wado Dalalka reer Galbeedka